Ahoana ny fanavaozana ny fanarenana nohavaozina amin'ny kinova farany | Androidsis
Ahoana ny fanavaozana ny fanarenana nohavaozina amin'ny kinova farany misy
Francisco Ruiz | | Fanarenana Android, Tutorials
Izahay dia efa nanomboka nanazava ny fomba fanavaozana ireo terminal Android sasany amin'ilay Android Android 5.0 Lollipop vaovao tsy ofisialy miaraka amin'ny ny Roms Alpha voalohany avy amin'ny Cyanogenmod 12. Izany no zava-misy amin'ny LG G2 na ny raharaha ny Modely iraisam-pirenena Samsung Galaxy S4 GT-I9505.
Amin'ny tranga LG G2, izay ny terminal izay ahy manokana, tsy maintsy nolazaiko anao izany Mahafinaritra ny Rom ary mihazakazaka tsy misy kilema ary tsy misy bibikely mihitsy, farafaharatsiny izay azontsika heverina ho manan-danja. Amin'ny tranga Samsung Galaxy S4, dia mbola mila kosina ihany ny zava-drehetra, na dia ny tena marina aza dia miseho mahatalanjona ny Android Lollipop Rom amin'ny tranga roa. Amin'ity lahatsoratra androany ity dia mikasa ny hitarika anao amin'ny Dingana fanavaozana ny fanarenana nohavaozina, dingana iray na fitakiana ilaina amin'ny fampidirana ireo Roms Cyanogenmod 12 mahombiaza ary mandeha ilay zavatra satria tsy maintsy mandeha.
Para havaozy ny fanarenana nohavaozina amin'ny kinova farany misy ho an'ny terminal anay, mora toy ny mandeha amin'ny pejin-tranonkalan'ny tetikasanao koa izany TWRP, Philz o CWM. Ampidino ao anaty ZIP ilay rakitra voahidy, adikao amin'ny fahatsiarovan-tenan'ny Android misy antsika izany, avereno amin'ny Recovery taloha ary ampidiro fa tsy mila manao karazana Hamafana. Avy eo, rehefa nipoaka indray mandeha dia tsy maintsy hamerina ny terminal fotsiny isika, avy amin'ny safidy Reboot, amin'ny maody Avereno amin'ny Mode Recovery.
1 Ahoana no hahazoako ny kinova farany an'ny TWRP Recovery?
2 Ahoana no hahazoako ny kinova farany an'ny Recovery Philz Touch?
3 Ahoana no ahazoako ny kinova farany an'ny CWM Recovery misy?
4 Ahoana no fanavaozana ny fanarenana amin'ny endriny farany?
Ahoana no hahazoako ny kinova farany an'ny TWRP Recovery?
La kinova farany amin'ny fanarenana TWRP novaina azontsika atao ny misintona azy avy amin'ny ity pejy web ity amin'ny alàlan'ny fanindriana ity rohy ity. Avy eo ny sisa ataonao dia tsindrio ilay safidy Makà TWRP Ho an'ny fitaovanao ary ao amin'ny drop-down dia soraty ny maodelin'ny terminal anao:
Ahoana no hahazoako ny kinova farany an'ny Recovery Philz Touch?
Amin'ny tranga Philz Touch Recovery, somary sarotra kokoa io satria tsy manana motera fikarohana mandroso toy ilay ao amin'ny pejy TWRP izy. Ka hahazoana ny kinova farany an'ny Recovery Philz Touch mila mijery ireo maodely rehetra misy amin'ity rohy ity ihany isika.
Ahoana no ahazoako ny kinova farany an'ny CWM Recovery misy?
Mba hahazoana ny kinova fanavaozana farany ny Clockworkmod Recovery, izahay ihany no hitrosa mivantana amin'ity pejy web ity ary safidio avy amin'ny lisitr'ireo terminal mifandraika amin'izany.
Ahoana no fanavaozana ny fanarenana amin'ny endriny farany?
Para havaozy ny fanarenana novaina amin'ny kinova farany, na inona izany na inona, tsy maintsy arahintsika ireo dingana tsotra avy amin'ny fanamboarana novaina taloha:
Izahay dia mandika ny zip nakarinao ho amin'ny fahatsiarovana anatiny an'ny terminal hanavao.
Mamerina amin'ny Mode Recovery izahay.
Avy amin'ny safidy hametraka mifantina ny zip alaina ary mandrehitra azy tsy misy mamafa.
Mandeha amin'ny safidy isika Reboot na safidy Advanced, arakaraka ny fanarenana nohavaozina, ary mifidy ny safidy izahay Avereno amin'ny Mode Recovery.
Rehefa haverina indray ny terminal dia hiditra ao amin'ny Recovery indray izy ary ho afaka hanamarina satria efa ananantsika ny kinova farany an'io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » Fanarenana Android » Ahoana ny fanavaozana ny fanarenana nohavaozina amin'ny kinova farany misy
Adolfo dia hoy izy:
Iza amin'ireo rom (na kinova stock) araka ny hevitrao no mety indrindra amin'ny lg g2?
Mamaly an'i adolfo
Raha tadiavinao ny stock flash tsara ny kdz farany izay heveriko fa ny eropa misokatra H ary avy eo fakao izany ary voila.
Hanazava ny fomba fanaovana izany amin'ny Recovery amin'ny zip kdz aho.
Okay, misaotra tamin'ny valinteninao
Zavatra iray hafa, tianao ve ny stock kdz rom na rom custom (mihoatra ny zava-dehibe rehetra momba ny fizakantena)?
Amin'izao fotoana izao dia mifikitra amin'ny ROM Evomagix Android 5.0 aosp aho.
Raha tsy maintsy mandeha ROM mifototra amin'ny tahiry aho dia azo antoka fa ny Cloudy G3.
Ao amin'ny lisitra misintona ny twrp dia tsy miseho ny lg g2. Iza amin'ireo no tokony halefako? MISAOTRA
Miarahaba, ny rehetra.
Tsy hitako ny fanarenana TWRP ho an'ny LG G2, ao amin'ny safidy Get TWRP For Your Device dia tsy hita izany. Misy manana ZIP alaina ve, na rohy mampidina azy? Misaotra betsaka mialoha.
CARLOS BARROSO dia hoy izy:
Toy izany koa no mitranga amiko, tsy miseho ny d802 iraisam-pirenena
Valio amin'i CARLOS BARROSO
Ho hitanao izany amin'ny fametrahana LG optimus G2
fanontaniana iray, ahoana no fiovako amin'ny philz touch ho twrp? mahafaly
Salama, rehefa manavao ny fanarenana aho dia manao azy araka ny voalaza ary miverina indray ary rehefa te hiditra amin'ny fanarenana aho dia toy ny hoe nanjavona, ahoana no hametrahako azy indray, ankehitriny manana Android 5.0.1 aho? Ampianaro aho….
UniSoft-AleBo dia hoy izy:
TWRP Install (Mila TWRP 2.8.4 na avo kokoa efa napetraka):
Sintomy ny rakitra TWRP farany (.img) avy amin'ny rohy fampidinana ary kitiho ny TWRP. Mandehana hametraka ary tadiavo ary safidio ny bokotra Images…. Mikaroha amin'ilay sary nakarinao ary safidinao.
Ampiasao amin'ity fomba ity …….
Safidio ny fanarenana ary kitiho ny flash.dd Fomba fametrahana (mitaky Root):
Sintomy ny fisie sary (.img) farany amin'ilay rohy fampidinana etsy ambony. Apetraho ao amin'ny fakan'ny folder / sdcard anao ary omeo anarana hoe twrp.img. Alefaso ireto baiko manaraka ireto amin'ny alàlan'ny shell adb na app emulator terminal:
dd raha = / sdcard / twrp.img an'ny = / dev / block / platform / msm_sdcc.1 / by-name / recovery
Mamaly an'i UniSoft-AleBo
Felipe Escala M. dia hoy izy:
Ao amin'ny pejy TWRP dia miseho lg g2 fa tsy fantatro izay kinova alaina ho an'ny D805, azafady mba ampio. MISAOTRA
Valiny tamin'i Felipe Escala M
Salama, te-hanavao ny fanarenana cwm an'ny samsung galaxy s2 i9100 aho ary hitako fa 4.0.1.5 ny kinova farany.
Mijery ilay napetrako aho ary v 5.0.2.7 io. Misy olona afaka manazava izany amiko?
jesosy roa dia hoy izy:
mifanaraka amin'ny telefaona misy ve ireo fanavaozana ireo?
Mamaly an'i Jesosy roa
Alberto Rosario dia hoy izy:
Ampio aho manana galaxy s4 ary io no nataoko fanadiovana ny rafitra ary ankehitriny rehefa alefako izy dia mivoaka ihany fa ao amin'ny sary famantarana ny galaxy ary tsy miakatra izany dia ilaiko ny fanampianao hamerenana ny android izay nanana kitkat 4.4.2, ny galaksiako dia Sprint s4 L720.
Mamaly an'i alberto rosario
Marcel dia hoy izy:
Inona no hitranga raha tsy manindry ny famerenana aho, maninona no tsy nataoko ary nahazo lamba mainty aho ... inona no ataoko amin'ity tranga ity? Manana lg g2 aho
Mamaly an'i marcel
Nametraka cyanogenmod aho araka ny nohazavainao tao amin'ny pejinao, tao amin'ny zuk z1 ahy hivoahana ny WiFi. Nanjavona ny olana fa tsy mametraka ny fanavaozana isan-kariva izy, mangataka amiko "fanarenana mifanentana amin'ny fametrahana tsy misy mpiambina". Inona no tokony hataoko ?? Tsy dia manam-pahalalana aho .... misaotra
Alika ratsy Linkon dia hoy izy:
Ny zavatra niainako, manana S4 Mini GT-i9195 aho, manana ny Cyanogenmod 13.0-20160210-NIGHTLY-serranoltexx napetraka, Android Version 6.0.1 Mashmellow, ary ny fanavaozana vaovao tsirairay dia mangataka famerenana mifanentana amiko. Izay alefako amin'ny ODIN, fa manjavona ary tsy afaka manavao aho raha tsy alefako amin'ny PC izany.
Olona mitovy aminy ihany no mahazo azy?
Misy mahalala ve ny vahaolana mety hitranga?
Mamaly an'i Linkon Bad Dog
Salama, rehefa te-hisintona ny fanarenana aho dia mahazo an'ity afisy ity…. TWRP ho an'ny Samsung Galaxy S2 i9100
Ny maodelin'i Samsung Galaxy S9100 i2 dia tsy hahazo ny fanohanan'ny TWRP ofisialy mihitsy. Ny i9100 dia tsy manana fizara fanarenana azo esorina. Fa kosa, ianao dia miraikitra amin'ny famerenana amin'ny laoniny ao anaty ROM na sary boot na kernel. Azonao atao ny mahita TWRP tafiditra ao anaty ROM, voanio, na sary boot, indrindra raha mahita OmniROM amin'ny fitaovanao ianao .. ..raha misy afaka manampy ahy dia ho feno fankasitrahana mandrakizay aho….
Valiny amin'i francisco
oswaldo oliveros dia hoy izy:
Tsara maraina ry namako, manana terminal sinoa aho, modely Blu, Blu Studio, iray plus, vitako ny nanongotra ny terminal niaraka tamin'i kingoroot, saingy mbola tsy mahita fanarenana novaina ho an'ity terminal ity aho, r mediatek MT 6753, ARM Cortex a53 processeur, 8 cores,
Mamaly an'i oswaldo oliveros
Salama, tsy haiko raha manana philz na cwm aho, dia rehefa apetrakao ny fanarenana dia azoko ao amin'ilay ampahany milaza ilay kinova:
»Philz touch 5
cwm base version »
Ka tsy haiko hoe iza avy no hametraka ilay fanavaozana
mvsame dia hoy izy:
Ny zavatra vita rehefa tsy miseho n'aiza n'aiza ny fahasitrananao manokana dia ny studio blu studio m hd.
Mamaly an'i mvsame
Ahoana ny fomba hanavaozana amin'ny fomba tsy ofisialy Samsung Galaxy Note 3 amin'ny Android Lollipop
Lohasahan'i Monument: morontsiraka hadino hita ao amin'ny Appstore Amazon